Seismic: Akwụkwọ Akwụkwọ Ahịa na Ihe Ntugharị | Martech Zone
Anyị natara nnabata taa mgbe Martech Zone akpọrọ a akụ kachasị maka ozi gbasara nkwado ahịa atụmatụ na teknụzụ sitere na Seismic. N'ime afọ gara aga, anyị ahụla ọhụụ dị egwu na oghere a nke na-eme ka ahịa na ahịa ahịa ka mma karịa ka ọ dịtụrụla.
Ebe nrụọrụ ahụ kwadoro anyị - aka nri Forrester, Salesforce na LinkedIn - bụ Seismic. Seismic wuru usoro njikwa ọdịnaya nke ụlọ ọrụ nke na -emepụta njikọ dị n'etiti akwụkwọ gị na isi mmalite nke ozi dị ka SharePoint na Salesforce, na-ahụ na onye ọ bụla nọ n'ahịa gị nwere ihe ọ bụla ha chọrọ, mgbe ha chọrọ ya.
Ngwá ọrụ ahịa dị ka Seismic nwere ike inwe mmetụta dị mkpa na arụmọrụ gị, yana uru bara ụba:
Onye nnọchi anya ire ahịa n'ụgbọ mmiri - zụọ ọhụụ ọhụrụ ngwa ngwa ma bido ịme ihe zuru oke.
Oge ịrụ ọrụ - onu ogugu na-etinye 35 pasent nke oge ha na-ere… ugbu a, ha nwere ike itinyekwu oge n'ire.
Ịga n'ihu agụmakwụkwọ - Gbaa mbọ hụ na ndozi gị maara nke ọma gbasara ngwaahịa ọhụụ na izi ozi.
Ihe omuma ndi ahia - tinyekọta na ngwanrọ CRM iji nye ndị nnọchi anya nghọta bara uru na akaụntụ ahịa ọ bụla.
Cycle osooso - mee ka usoro ire ere dị mkpụmkpụ, nke nwere ike ịmalite site na akpaaka ahịa na oge ntụgharị na nkwekọrịta.
Nyefee ọdịnaya - The lynchpin to sell enablement, inwe ike ịnapụta nri ahịa ihe n'oge na ngwaọrụ ọ bụla iji hụ na otu na-otu ahụmahụ pụtara na a ikwughachi ụzọ.
Ulo oru ndi nyekwara aka na ngwa ahia na ihe ndi ozo iji mee ka ohia ahia hu Ọganihu 51 na ọnụọgụ mgbanwe ntụgharị, dị ka otu ndị nyocha Aberdeen si kwuo. Banyere Pasent 54 hụrụ mmụba kwa afọ na ahịa ndị na-ere nzute.
Tags: dị ndụ docỌzụzụ Azụmaahịaịnyịnyaọdịnaya ahịaakwụkwọ ahịaakwụkwọ ahịaNkwado ire ahịaihe ngosi erereonye na-ere ahịaonye nnọchi anya ịre ahịandị ahịaala ọma jijijintụgharị uche